Kufamba kuThailand? Iva wakagadzirira kutora 3 COVID-19 bvunzo
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Thailand Kuputsa Nhau » Kufamba kuThailand? Iva wakagadzirira kutora 3 COVID-19 bvunzo
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • nhau • Kuvakazve • Thailand Kuputsa Nhau • ushanyi • Tourism Kutaura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Akasiyana Nhau
Kana iwe uri kuenda kuThailand, gadzirira kuongororwa katatu - yekutanga iri pazuva rekuuya, rechipiri pazuva rechitanhatu kana rechinomwe, uye rechitatu pazuva re12 kana 13.
Gurukota reThailand, Gen.
Icho chinonyanya kudikanwa kune vashanyi chinoramba chiri chekuti dzinofanirwa kubva kune yakaderera COVID-19 nyika dzine njodzi kana nzvimbo.
Vafambi vanofanirwa kunyoresa nemapuratifomu ane hukama uye kuendesa zvinyorwa zvavo kuti zvionekwe.
Phuket inotangazve kuvhenekerwa vashanyi nhasi (Chikunguru 1), naVa Prime Minister, Gen. Prayut Chan-o-cha, vakatarisirwa kusvika mupurovhinzi kuzotarisira kuvhurwa kwayo. Webhusaiti yeRoyal Gazette nguva pfupi yadarika yakaburitsa mutemo wechi26 wechimbichimbi pane zvinodiwa uye nhungamiro dzekuvhurazve chikamu chekushanya munzvimbo dzekuchaira, kutanga China, Chikunguru 1. 2021.
Chirevo chinotarisa pazvinowedzera zvinodiwa uye matanho ekudzivirira chirwere che vafambi vanopinda muThailand. Chirevo chinoratidzira nzvimbo dzekushanya mumatunhu ekuchaira, uku uchiseta mamiriro, nguva, manejimendi, uye zvimwe zvirevo zvevafambi vanopinda muumambo
Nezve matanho ekudzivirira chirwere, iyo Center for COVID-19 Situation Administration (CCSA) yakapa nhungamiro yechirongwa chekushanya chePhuket Sandbox, uye zvakaburitswa pawebhusaiti yeRoyal Gazette. Izvo zvakakosha zvinodiwa zvinogara sepakutanga - zvinozivikanwa, vashanyi vanofanirwa kubva pasi COVID-19 njodzi nyika kana nzvimbo. Ivo vanofanirwa kunyoresa nemapuratifomu ane hukama uye kuendesa zvinyorwa zvavo kuti zvionekwe. Zvinyorwa zvinotevera:
- Chitupa cheKupinda
- Chitupa chekurapa chinoratidza hutachiona hweECVID-19 isina kunaka, uchishandisa reverse transcript polymerase chain reaction (RT-PCR) bvunzo mukati maawa makumi manomwe nemaviri asati abva
- Inishuwarenzi yehutano, inovhara COVID-19, iine hushoma kufukidzwa kwe100,000 US madhora
Uye kana mhedzisiro yavo isina kunaka mushure memazuva gumi nemana, vanogona kuenda kune dzimwe nzvimbo. Kana vakagara pasi pemazuva gumi nemana, havatenderwe kufamba kunze kwenzvimbo dzakatarwa. (Faira pikicha - Rwendo rwechikepe kuKoh Hae, Phuket)
- Humbowo hwekubhadhara kweKuchengetedza uye Hutano Kutungamira (SHA) Uye pekugara kwemazuva gumi nemana Vashanyi vanogara mashoma kupfuura mazuva gumi nemana vanofanirwa kunge vane tikiti inotsanangura zuva rekuenda
- Chitupa cheNhomba chakapihwa kwemazuva asingasviki gumi nemana. Vanhu vari pasi pemakore gumi nemasere ekuberekwa, vachiperekedzwa nevabereki vavo kana vanovachengeta, vanofanirwa kunge vaine chitupa chekurapa chinoratidza hutachiona hweECVID-14 husina kunaka mukati memaawa makumi manomwe nemaviri vasati vaenda.
Vafambi vanopinda muumambo vanofanira kupfuudza nzira yekuenda kune dzimwe nyika, kuisa chishandiso kana yekutevera system uye kuyedzwa katatu. Yokutanga iri pazuva rekuuya, rechipiri pazuva rechitanhatu kana rechinomwe uye rechitatu pazuva regumi nembiri kana regumi nematatu. Vashanyi vanofanirwa kubhadhara mutengo weCOVID-12 kuyedzwa. Kana zvavakawana zvisina kunaka mushure memazuva gumi nemana, vanogona kuenda kune dzimwe nzvimbo. Kana vakagara pasi pemazuva gumi nemana, havatenderwe kufamba kunze kwenzvimbo dzakatarwa.